China Ebube Nke Nwere Ike ịmepụta China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ebube Nke Nwere Ike ịmepụta - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ebube Nke Nwere Ike ịmepụta)
Nke a 70W Led Canopy Ìhè nyeere 8400 LM na 5000K ìhè White. Nnukwu arụ ọrụ ruo 120mm / w! The Dimmable Dugara kanopi Ìhè nwere p ower Nrụpụta ọrụ karịa 95% na ogologo ndụ oge 50,000 awa. 75W Led Canopy Light Bulbs with ETL Depụtara provides top quality and performance. Usoro ntinye di elu, nkoro di omimi na ihe...
Ebube Nke Nwere Ike ịmepụta Ebube nke nwere ike ịmepụta Ebube nwere ike ịgbanwu ọkụ 150w Enwere ike ịchọta Amazon Ebube nke kachasị elu Ebube Ụlọ Nlekọta Azụ Enwere ike ikpuchi ọkụ Nke a na-emepụta 100W